I Luis Miguel Sánchez Cerro dia miaramila sy mpitondra fanjakana tao Però izay fioham-pirenena indroa tao amin' io firenena io. Filoha izy tamin' ny 27 Aogositra 1930 hatramin' ny 1 Marsa 1930, amin' ny maha fiohan' ny Junta azy taorian' ny fionganan' i Augusto Leguía, avy eo amin 'ny maha lehiben' ny governemanta azy teo am-pitarihana ny antokony, dia ny Unión Revolucionaria, izay nivoy ny firehan-kevitra fasista, izay nokasainy hata antoko tokana. Novonoin' ny mpomba ny Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), izay fikambanana notoheriny, izy. Teraka tamin' ny 12 Aogositra 1889 tao Piura izy ary maty tamin' ny 30 Avrily 1933 tao Lima tamin' ny faha-43 taonany.
Gasy firazanana[hanova | hanova ny fango]
I Luis Miguel Sanchez Cerro dia gasy firazanana. Any Però tokoa mantsy dia misy faritany antsoina hoe Piura izay fonenan’ ireo Mangaches (Malagasy) namidy ho andevo nalefa niasa tany Amerika Atsimo. Marihina fa ny anaran’ ny tompony (ny olona nividy azy) no iantsoana ireo Mangaches ireo, izany hoe na dia Malagasy aza ity lehilahy ity dia very ny anarana maha-gasy azy satria ireo ray aman-dreniny (izay mpanompo) dia efa nitondra ny anaran’ ny tompony ka nampita izany tamin’ ny zanany.
Ao amin’ ny faritra avaratr’ io Piura io no ahitàna an’ ilay tanàna atao hoe La Mangacheria izay nahaterahan’ i Sanchez Cerro. Any koa dia misy saha iray antsoina hoe "Hacienda Malakasy" izay fonenan’ ireo Malagasy fahagola. Ankehitriny kosa, na dia mbola maro aza ny Mangaches nahatazona ny volo-koditra maha-Malagasy azy, dia efa nifangaro tamin’ ny mponina any an-toerana ny ankamaroany ka nizara ny kolotsainy tamin’ izy ireo. Anisan’ ny vokatr’ izany kolotsaina mifangaro izany ny mozika Tondero.
Fiainana ara-pôlitika[hanova | hanova ny fango]
Nanongam-panjakana i Luis Miguel Sánchez Cerro ka lasa filoham-pirenena tany Però tany Amerika Atsimo tamin’ ny 27 Aogositra 1930 hatramin’ny 1 Marsa 1931. Lany tamin’ ny fifidianana filoham-pirenena indray izy ny 8 Desambra 1931 rehefa nifanandrina tamin’ ny kandidà telo hafa, ka nitondra an’ i Però hatramin’ ny 30 Avrily 1933, andro nahafatesany. Marihina moa fa nisy nitifitra izy tamin’ io andro io, teo amin’ ny faha-43 taonany, ka voatery niova filoham-pirenena i Però na dia tsy tapitra aza ny fe-potoana natokana hiasany.
Notsongoin’ olom-bolo sy mamy hoditra tamin’ ny vahoaka tokoa izy fony fahavelony noho izy safiotra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Miguel_Sánchez_Cerro&oldid=998609"
Voaova farany tamin'ny 25 Novambra 2020 amin'ny 10:37 ity pejy ity.